श्रीमतीसँग मस्त सु’तिर’हेका श्रीमान् रा’ती साढे २ बजे प’लङ’मु’निबाट आ’वा’ज आएपछि, यस्तो भयो !!!! – News Nepali Dainik
श्रीमतीसँग मस्त सु’तिर’हेका श्रीमान् रा’ती साढे २ बजे प’लङ’मु’निबाट आ’वा’ज आएपछि, यस्तो भयो !!!!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २७, २०७७ समय: १५:५१:००
श्रीमतीसँग मस्त सु’तिर’हेका श्रीमान् रा’ती साढे २ बजे प’लङ’मु’निबाट आ’वा’ज आएपछि ब्यूँ’झिए । उनले प’लङ’मुनि के रहेछ भनेर हेर्दा त्यहाँ उनकी श्रीमतीका प्रेमी लु’कि’रहेको भेट्टाए । बे’ड’रुममा श्री’मतीका प्रेमी भे’ट्टाएपछि उनी रि’सले आगो भए ।उनले प्रे’मीलाई त्यहीँ म’रणा’सन्न हुनेगरी कु’टे । हल्ला’खल्ला भएपछि गाउँलेहरु जम्मा भए । ती व्यक्तिले श्री’मती र उनका प्रे’मीलाई एउटा को’ठामा थु’निदिए ।
भारतको बिहार कटिहार जिल्लामा यस्तो वि’चि’त्रको घ’ट’ना भएको हो ।मंसुर नाम गरेका ती व्यक्तिकी पत्नी फरिदा खातुन पाँच बच्चाकी आमा हुन् । केही समय अघिदेखि फरिदाको गाउँकै मोहम्मद मासूम नामका यु’वकसँग प्रे’म स’म्बन्ध च’लिरहेको बताइएको छ ।
मंसुरले यसअघि पनि आफ्नी श्री’मतीलाई प्रे’मीसँग आ’प’त्ति’ज’नक हालतमा भेट्टाएका थिए । त्यतिबेला उनले अ’बका दिनमा यस्तो नगर्ने चे’ता’वनी दिएर छो’डेका थिए । तर, ती दुईले त्यसपछि पनि लगातार भे’टिरहे ।मंसुरको घरमा पाँच कोठा छन् । फरिदाले आफ्ना छोराछोरीलाई अर्कै कोठामा सुताएर आफू श्रीमान्सँग सु’त्ने ग’र्थिन् । श्रीमान् र परिवार निदाएपछि उनले रातीमा आफ्ना प्रे’मीलाई घरमै बो’लाउँथिन् ।
मंगलबार पनि यस्तै भएको थियो । फरिदासँग भे’ट्न उनका प्रे’मी मा’सूम उनको बेडरुममै पु’गेका थिए ।त्यही बेला उनका श्रीमान्ले ढो’का ढक्ढक्याए । ड’रा’एका मासुम बे’डमुनि लु’के । तर मं’सु’रलाई निद्रा लागेन । त्यही का’र’ण बेडमुनि सु’तेका मा’सूम पनि भाग्न पा’एनन् । घ’ट’नापछि गाउँमा पञ्चायत बोलाएको बताइएको छ ।